पाठ सिकियो: सोशल मीडिया प्लेटफर्म र ब्लॉकचेन मास एडोप्शन Martech Zone
सुरक्षित डाटा को लागी एक समाधान को रूप मा blockchain को स्थापना एक स्वागत योग्य परिवर्तन हो। सबै भन्दा धेरै अब, सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरु को रूप मा लगातार आफ्नो जनता को गोपनीयता को दुरुपयोग गर्न को लागी आफ्नो व्यापक उपस्थिति को लाभ उठाएको छ। यो एउटा तथ्य हो। एक तथ्य जुन पछिल्लो केहि बर्षहरुमा ठूलो जन आक्रोश लाई आकर्षित गरेको छ।
गत वर्ष मात्र, फेसबुक भारी आगोको अधीनमा आयो इ England्ल्यान्ड र वेल्सका १ लाख प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत डेटाको दुरुपयोगको लागि। मार्क जुकरबर्गको नेतृत्वमा रहेको सोशल मिडिया कम्पनीलाई कुख्यात क्याम्ब्रिज एनालिटिका (सीए) कांडमा पनि समेटिएको थियो जसमा opinions करोड f० लाख मानिसहरू (विश्वव्यापी) को तथ्यांक संकलन गर्ने काम थियो जसमा राजनीतिक विचारलाई ध्रुवीकरण गर्न र चुनावमा चन्दाका लागि राजनीतिक विज्ञापनलाई लक्षित गर्ने थियो।
यदि त्यहाँ एक ब्लकचेन-आधारित सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म त्यस्ता खराबीको लागि प्रतिरक्षा थियो भने मात्र। जीवन यति धेरै राम्रो हुनेछ।
फेसबुक - क्याम्ब्रिज एनालिटिका Imbroglio विस्तारित, स्रोत: Vox.com
अगाडि बढिरहेको छ, यद्यपि CA ले सम्पूर्ण विश्वको आलोचना र आलोचना गरे, an लेख भोक्समा मे २, २०१2मा प्रकाशित, यो अधिक किन हो भनेर अन्वेषण गरियो एउटा क्याम्ब्रिज एनालिटिका भन्दा फेसबुक घोटाला.
… यसले प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको डाटामा फेसबुकमा कत्ति विश्वास गर्न सक्दछन् भन्नेमा ठूलो बहस हाइलाइट गर्दछ। फेसबुकले तेस्रो-पार्टी विकासकर्तालाई डाटा इकट्ठा गर्ने एकमात्र उद्देश्यको लागि अनुप्रयोग ईन्जिनियर गर्न अनुमति दियो। र विकासकर्ताले अनुप्रयोगलाई प्रयोग गर्ने मानिसहरू मात्र उनीहरूका सबै साथीहरूको मात्र जानकारी नक्कल गर्नका लागि लुफोलको शोषण गर्न सक्षम थिए - उनीहरूलाई थाहा नपाई।
यो भयावह स्थिति को समाधान के हो? एक blockchain आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली। अवधि।
ब्लकचेनले कसरी सामाजिक मिडिया गोपनीयता उल्ल and्घन र डाटा पाइलिफेज रोक्न मद्दत गर्न सक्छ?
सामान्यतया, त्यहाँ एक प्रवृत्ति Bitcoin को blockchain टेक्नोलोजी लाई जोड्ने हो। तर, यो बिटकोइन लेनदेन को निपटान को लागी मात्र एक लेजर भन्दा धेरै छ। भुक्तानी संगै, blockchain आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन, डाटा प्रमाणीकरण, र पहिचान सुरक्षा को पुनः परिभाषित गर्न को लागी पर्याप्त क्षमता छ।
अब, तपाईंले सोचिरहनुपर्दछ कि १२ बर्ष अघि मात्र देखिएको एउटा नयाँ टेक्नोलोजी कसरी यी सबै क्षेत्रहरूलाई पुन: परिभाषित गर्न सक्दछ।
ठिक छ, यो किनभने प्रत्येक ब्लक गर्नुहोस् एक blockchain मा डाटा को हेपिंग एल्गोरिदम मार्फत cryptographic सुरक्षित छ। लेजरमा प्रवेश गर्नु अघि कम्प्युटरको नेटवर्कले डाटा प्रमाणीकरण गर्छ, हेरफेर, ह्याक, वा मालिसियस नेटवर्क टेकओभरको कुनै सम्भावना हटाएर।
कसरी ब्लकचेन काम गर्दछ, स्रोत: msg- ग्लोबल
तसर्थ, प्रमाणीकरणको लागि blockchain प्रयोग गर्दै जब यो सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको लागि आउँदछ सही अर्थ बनाउँदछ। किन? किनभने सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मले व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारी (PII) भण्डारण र व्यवस्थापनको लागि परम्परागत पूर्वाधार प्रयोग गर्दछ। यस केन्द्रीकृत पूर्वाधारले विशाल ब्यापार फाइदा प्रदान गर्दछ, तर पनि ह्याकरहरूको लागि ठूलो लक्ष्य हो - जसरी फेसबुकले ह्याकि recentlyको साथ हालसालै हेर्यो। 533,000,000 XNUMX,००० प्रयोगकर्ताको खाता.
महत्त्वपूर्ण डिजिटल ट्रेसहरू बिना पारदर्शी अनुप्रयोग पहुँच
Blockchain ले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ। , एक विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा, प्रत्येक प्रयोगकर्ताले आफ्नै डेटा नियन्त्रण गर्न सक्दछन्, लाखौं मानिसहरूलाई प्राप्त गर्न लगभग असम्भव को एकल ह्याक। सार्वजनिक कुञ्जी क्रिप्टोग्राफिको समावेशले डाटा सुरक्षालाई अझ बृद्धि गर्दछ, जसले व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण डिजिटल पदचिह्न छोड्नुभएन भने उपनाम प्रयोग गर्न सक्दछ।
वितरित लेजर टेक्नोलोजी (DLT) ले व्यक्तिगत डाटामा तेस्रो-पक्षको पहुँचलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा कम गर्दछ। यसले अनुप्रयोग प्रमाणीकरण प्रक्रिया पारदर्शी छ र केवल अधिकृत व्यक्तिले आफ्नो डाटा पहुँच गर्न सक्दछ भनेर सुनिश्चित गर्दछ।
ब्लकचेन-आधारित सामाजिक नेटवर्कले तपाईंलाई क्रिप्टोग्राफिक कुञ्जीहरू नियन्त्रण गर्न दिँदै तपाईंको आफ्नै पहिचानलाई नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली बनाउँदछ जुन तपाईंको डाटामा पहुँच अनुमति दिन्छ।
ब्लकचेन दत्तक र सामाजिक मीडिया को विवाह
Blockchain अपनाउने अझै पनी महत्वपूर्ण बाधाहरुको सामना गर्दछ। टेक्नोलोजी आफैं संवेदनशील डाटा को रक्षा को लागी आदर्श साबित भएको छ, तर वास्तव मा प्रक्रिया को माध्यम बाट जाने को विचार को रूप मा भरपर्दो आउँछ। मानिसहरु अझै पनी blockchain लाई पुरा तरिकाले बुझ्दैनन् र टेक्निकल शब्दजाल, जटिल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस, र reclusive डेवलपर समुदायहरु को एक धेरै धेरै बाट डराउन को लागी लाग्छ।
धेरै जसो उपलब्ध पहुँच पोइन्टहरूमा प्रवेशका लागि धेरै उच्च अवरोध छ। सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको तुलनामा, blockchain स्पेस साधारण मानिसहरू बुझ्दैनन् कि प्राविधिकताहरु संग अलग छ। र इकोसिस्टमले घोटाला र रग पुललाई बढावा दिन नकारात्मक प्रतिष्ठाको केही विकास गरेको छ (किनकि यसलाई डेफाइ टर्मिनोजी भनिन्छ)।
यसले ब्लकचेन उद्योग को बृद्धि लाई रोकेको छ। यो १२ बर्ष भन्दा बढी भैसकेको छ जब सातोशी नाकामोतोले संसारलाई पहिलो पटक blockchain को लागी पेश गरे, र यसको मुख्य क्षमता को बावजूद, DLT ले अझै पर्याप्त कर्षण पाएको छैन।
यद्यपि, केहि प्लेटफर्मले विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगहरू (dApps) प्रयोगकर्ता-मैत्री बनाउने र उनीहरूको पहुँच चौडा गर्ने workarouts शुरू गरेर blockchain अपनाउने प्रक्रिया सजिलो बनाउन मद्दत गर्दै छ। यस्तो प्लेटफर्म AIKON हो जुन भनिन्छ यसको स्वामित्व समाधानको माध्यमबाट blockchain उपयोग सरल गर्दछ ORE आईडी.
एआईकेओएनको टोलीले ORE आईडी डिजाइन गरेको छ सामाजिक सोशल मीडिया प्लेटफर्मको माध्यमबाट blockchain को रचनात्मक एकीकरण सक्षम गर्न। व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक लगइनहरू (फेसबुक, ट्विटर, गुगल, आदि) ब्लकचेन पहिचान प्रमाणिकरणको लागि प्रयोग गर्न सक्दछन्।
यहाँ सम्म कि संगठनहरु blockchain पारिस्थितिकी तंत्र मा निर्बाध रूप बाट आफ्नो (ग्राहकहरु) विकेन्द्रीकृत पहिचान आफ्नो मौजूदा सामाजिक मिडिया लगइन संग बनाउन सक्छन्।
यसको पछाडि विचार blockchain अनुप्रयोगहरु को उपयोग मा जटिलताहरु लाई कम गर्न को लागी हो। AIKON को ORE आईडी समाधान तार्किक अर्थ बनाउँछ र सामाजिक लगइन को माध्यम बाट पहुँच सक्षम पारम्परिक आवेदन को पहिले नै अवस्थित अभ्यास बाट उधारो।
यस विवाहको लागि काम गर्नको लागि किन एक सहज प्रयोगकर्ता अनुभव आवश्यक छ?
सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरु को विपरीत, जटिल blockchain अनुप्रयोग प्रयोगकर्ता इन्टरफेस सबैभन्दा महत्वपूर्ण बाधाहरु blockchain टेक्नोलोजी मा सामूहिक गोद लेने को अनुभव बाट रोक्न हो। मानिसहरु जो यति धेरै प्राविधिक आवाज बाहिर छोडिएको छ र पर्याप्त प्रेरित blockchain आधारित सेवाहरु को उपयोग संग अगाडि बढ्न को लागी महसुस गर्दैनन्।
Blockchain र सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरु को सहज एकीकरण (सहज उपयोगकर्ता इन्टरफेस को माध्यम बाट) व्यवसाय र निगमहरु लाई सहज DLT ब्यान्डवागन मा आफ्नो ग्राहकहरु लाई जहाज मा टेक्नोलोजी को जन अपनानी लाई प्रोत्साहित गर्न मद्दत गर्न सक्छ। मानिसहरु मात्र आफ्नो ईमेल, फोन, वा सामाजिक लगइन संग लग इन गरेर blockchain सेवाहरु को उपयोग गर्न को लागी सक्षम हुनु पर्छ। त्यहाँ सबै अन्तर्निहित विकेन्द्रीकृत टेक्नोलोजीहरु 'intricacies बुझ्न को लागी कुनै आवश्यकता छैन।
त्यो यदि हामी सामूहिक blockchain अपनाउने प्राप्त गर्न चाहान्छौं।
टैग: आइकनएल्विन चांगप्रमाणीकरणBitcoinblockchainblockchain प्रमाणीकरणक्याम्ब्रिज विश्लेषकपुष्टिडाटा गोपनीयताफेसबुकमार्क जुकरबर्गग्लोबलअयस्क आईडीp2pपियर टु पियरगोपनीयतासामाजिक संजालसामाजिक मिडिया गोपनीयताप्रमाणिकरण
हामी AIKON। हामी विकेन्द्रीकृत भविष्यमा विश्वास गर्दछौं। यस्तो विश्व जहाँ सबै डिजिटलीज हुनेछ - र टोकनाइज गरिएको जहाँ हरेक सम्पत्ति र सेवा अधिक सुरक्षित, सजीलो र बिचौलिया बिना व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। हामी ORE आईडी प्रदान गर्छौं जुन एक blockchain प्रमाणीकरण प्रणाली हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई ईमेल, फोन, वा सामाजिक मिडिया खाताहरू मार्फत blockchain अनुप्रयोगहरू पहुँच गर्न मद्दत गर्दछ।